Aaron Ramsey 2-daqiiqo oo qura ayuu ku sameeyay wax uu Pogba ku sameyn waayay 810-daqiiqo – Gool FM
(England) 31 Oktoobar 2016. Aaron Ramsey ayaa culeyska ku sii badiyay laacibka ugu qaalisan kubbada cagta adduunka ee Paul Pogba kaddib markii uu 2-daqiiqo oo qura ku sameeyay wax uu laacibka reer France ku sameyn waayay 810-daqiiqo.
10-usbuuc uu garoomada ka maqnaa kadddib Ramsey ayaa usbuucan dib ugu soo laabtay garoomada ciyaartii ay dhawaan 4-1 uga adkaadeen naadiga Sunderland.
Markii ay ciyaartu mareysay 77-daqiiqo ayaa badel lagu keenay waxayna ku qaadatay 2-daqiiqo oo qura inuu sameeyo caawimaad oo wuxuu goolka afaraad ee ciyaarta u baasay Alexis Sanchez.
Pogba ayaa saftay sagaal kulan oo dhammeystiran horyaalka Premier League 810-daqiiqo hal caawin ahna ma uusan sameyn ilaa iminka.
Ramsey ayaa dhaawac ka soo gaaray kulankii furitaanka horyaalka ay la yeesheen Liverpool haddii daqiiqadihii uu markaa ciyaaray lagu daro kuwii uu ciyaaray kulankii sabtida ee Sunderland waxay isku noqonayaan 74-daqiiqo taa oo la micno ah inuu 74-daqiiqo ku sameeyay wax uu Pogba ku sameyn waayay 810-daqiiqo.
Kaddib goolkii uu dhaliyay shalay, Diego Costa oo ku soo biiray LIISKAN.....(EEG)